Sawiro:- Banaan bax lagu difaacayo askarigii maanta lagu xukumay Boosaaso oo kadhacay Sanaag – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSawiro:- Banaan bax lagu difaacayo askarigii maanta lagu xukumay Boosaaso oo kadhacay Sanaag
Sawiro:- Banaan bax lagu difaacayo askarigii maanta lagu xukumay Boosaaso oo kadhacay Sanaag
July 29, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 6
Shacabka Magaaladda Dhahar ayaa caddaalad daro ku tilmaamay eedayn iyo xukun ay maanta Maxkamadda shanta Gobol iyo Dambiyad culusi ay ku riday Laba xidigle Max’uud Axmed Cabdi Sheekeeye oo ka tirsanaa ciidamadda PMPF.
Askarigan ayaa lagu soo eedeeyey in uu gudaha ugudbiyey Baastooladdii lagu dilay Maareeyihii hore ee Dekedda Bosaaso , inkasta oo eedaysanuhu iska diiday eedaymahan lagu eeday haddana Maxkamaddu iyada oo cuskanaysa markhaantiyaal an warbaahinta loo soo bandhigin ayey ku riday Xukun dil toogasho ah oo leh Bil rafcaan ah.
DAAWO VIDEO:Fanaan Reer Muqdisho oo Hees Yaab leh Ku Karbaashey BK” MA HARGEYSA XARAMKII AH MA XAMAR BAA XAD YAHUUD AH”
ARIN MURUGO IYO CALOOL XUMO:Hooyo Soomaaliyeed oo 4 Teeda Caruur Ku Weysey Qaraxyada Muqdisho
dadkani nasiib daranaa, oo hadii nabadna la rabbo wax walbana qabiil loo bedelayo dalku ma jirayaa?
Shaabeb baan ahay hadii la iqabtana qabiil baan hoos galayaa miyaa shaqadu?
wadankan dan baa looga guuri ee hakaga cayarina nimanka u imaanaya oo ilaashanaya ee oromada ah iyagaa kolba dhaxli doona, maalinkaa dadku bal aydoo dumarka suuqa lagu garacayo ha banan bexeen.
kuwa ceel afweyn iyo agagaaraheeda isku dilayana waa lamid, war xagee dadkan laga inkaaray.
waxaan maqli jiray xidinxiitada lagu habaaray ha harsan hana hoyan, oo sidaasay habeen iyo maalin hurda la’aan u qaylyaysaa.
hadda soomaalidu waa ha harsanina hana hoyanina melkasta ooy joogaan.
Khald hadiii lagu xukumay , cadaaalad daro jirto ha la sii daayo.
Majeerteenku waxeey xukumi yaqaanin waxaan aan Majeerteen ahayn. Waa kaasoo kuwi Caaisha kufsaday wax ha ka yeelaan.
Umalaynmaayo caddaalad darro in loo xukumay ninkaas dadkaan jaahiliintaa qabiil baa madaxmaray oo cunto biyo nonol u noqday. Muslimiin baan nahayna waa leeyihiin. Sharka dambiga dulliga dilka jahliga waa uga dheereeyaan kuwa aan muslimka ahayn
Dhulka Ilaahay baa leh waxaana soo degi doona dad garanaya macnaha nabaddu leedahay dad baa la wareegi doona dhulkaan Haddaan soomaali qabiilka ka ilbixin oo aanay wada jir dalkooda bahalka uga ilaashan
Adiga cudur majeerteen ayaa ku haya.. dawo ma laha
Daawo wey jirtaa. Markey toogtaan kuwii kufsaday/dilay Caaisha markaas waan daaweysmiyaa.
Adigu soo ma aheen reer jeegaan???